Kuratidza zvinyorwa neelebheri Rotštejn
Rotštejn kuparadzwa kwedombo renhare. Iyo inowanikwa inosvika 9 km kumabvazuva kweTurnov, pamucheto wechisiko chengetedzo Klokočské skály. Matongo acho akaiswa chikamu uye akavezwa muchivezwa mumabwe emabwe. Imba iyi yakavambwa nguva pfupi yadarika gumi nemaviri nemakumi mashanu nevarume vemhuri yaMarkwartic. Muridzi wekutanga anonzi Mr. Jaroslav weHrutwice, nhasi Hruštice, uyo akavakira muzinda wake Vok weRotštejn. Wechipiri wevanakomana vake, Zdeněk, akavaka Wallenstein uye akava muvambi wemhuri yeWallenstein.
Muridzi we "mukurumbira" muzinda uyu Vok II. kubva kuRotštejn, uko, kubvira 1312, vanhu vanokudzwa kwete chete kubva munzvimbo dziri padyo dzakakuvadza pfuma uye nzvimbo munzira dzakasiyana siyana (JVŠimák). Zvese zvakaperera muna 1318, apo nzvimbo dzeRotštejn nedumba roga rakatsakatiswa nekukura kukuru kwevarwi.
Muna 1360 imba yekutandarira yakaitwa Mr. Ješek (Jan) weRotštejn, uyo anobva kuna Charles IV. vakawana mvumo yekuchengeta misika yevhiki nevhiki mumusha uri padyo weKlokočí. Muna 1415 mhuri yeRotštejn yakafa uye imba yese ndeyaOndřej kana Vaněk Paldr ye…